Dib U Eegis Sanadkii 2012 Iyo Khilaafadkii Dhex Maray Fanaaniita Soomaaliyeed (Qormo Xiiso Badan) - iftineducation.com
iftineducation.com – Fanka Soomaliyeed oo horumar aad u weyn yeeshay sanadka 2012 markii loo fiiriyo sanadadii hore, ayaa hadana isku dhaca iyo khilaafadka fanaaniinta uusan ka marneyn.2012 ayaa soo bateen heesa lasoo baxa muuqaal aad u qurux badan iyo fanaaninta oo labis fiican xirta halkee markii hore ahaan jirtay in codkooda la maqlo oo kaliya muuqaalkoodana la mala awaasho.
Sanadkan hada labada maalmood ka dhimantahay ayaa waxa isku dhacay faniin fara ku tirisa oo eey ka mid yihin:
1. Aar Maanta vs Ahmed Rasta
Aar Maanta iyo Ahmed Rasta ayaa dagaal afka ah ku dhex maray safxada Facebook ayaga is weeydaarsaday hadalo ad adag, sababta keentayna lama oga ilaa iyo hadeertan. Fanaanka reer America ee Axmed Rasta oo sida warka nasoo garay biilabay sheekda ayaa ku qoray darbigiisa facebook sidatan “waan ku sugayaa waraa waxaad iskula hadashay malagaagi soo dhaqso abti ama yarka lawayay“. Aar oo asna ku sugan London ayaa ka gaabsan oo ku jawaabay “Nin la yidhaahdo Ahmed Rasta ayaa bilaabay inuu internetka iiga soo hanjabo, muxuu igu maagay tollow? ma gabadhiisaa heesahayga ku wareerisay!” meel eey is qilaafkan ku dambeeyana ilaa iyo hada lama oga.
2. Farxiya Fiska vs Bashiir Hanuuniye
Fiska iyo Bashka ayaa qilaafkoodi in badan soo jiitamaaye ayagoo wax badan heeso is weeydaarsaday ilaa markii eey kala tageen. Labadan fanaan ayaa had iyo guur isku daya iney iska maseersiiyaan oo isla soo sawira dad kale ayagoo la jooga oo jeceyl muujinaya. Fiska heesti igu dambeysey ee ku daadineeso Bashiir ayaa heesta “Inagu kala qulquli” miraheeda ka mida ah “Inaad Caashaqa Qadarisoo Nafteyda Qiimeyn Baan Qalbiga Ku Heystee Miyaan Qalad Kaa Filayee” Bashkana kama yareysan oo wuxu ugu jawaabay hees lugu magacaabo “Habeen tagay masoo laabto” waxana ka mida miraheeda “Doraad adoo har joogay nimcadu ku hareer taaloo adoo hubin oo ka fiirsan markaad howl kale u booday Habeen tagay sooma laabto“Hadaba sanadka soo socda sheekadan jaceyl ee taxanaha ah halkee ku dambeyn doonta?
3. Cawaale Adan vs Dalmar Yare
Fanaanka caanka ah ee Cawaale Adan ayaa meel lugu caweeyo ka kacay kadib markii la shiday hees uu leeyahay Dalmar Yare, ka hor intuusan kicin ayuu codsaday in laga damiyo heesto oo mid kale la daaro laakiinse dhalinyarti meesha fadhiday ayaa ka diiday Cawaalena wuu iska baxay marfishkii. Tolow heesta Cawaale ka xanaaqey tee bey eheyd?
4. Sagal Arts vs Hamda Queen
Dagaalki in badan soo dhex taagna Falis Cabdi iyo Ikraan Caraale ayaa sanadka 2012 waxa sii waday Sagal Arts iyo Hamda Queen. Sababta kusoo biirisay lama oga balse waxa hubaal ahna iney labadoodaba taqaanto qofta ey u hiilineeso oo isku magaalo joogaan. Akhriste sanadka 2013 yaa sii wadi doona bey kula tahay buuqeey soo bilaabeen Falis iyo Ikraan?
5. Farxiya Kabayare vs Virginia
Farxiya Kabayare iyo Somalida ku dhaqan Virginia ayaa isku kadib markeey Fiska usoo guurtay Virginia si ey ula noolaato gacaliyaheeda. Xaflad soo dhoweyn oo la rabay in loo qabto ayey ku eedeysey in magaceeda la isticmaalay si dan gaar ah loo xayeysiiyo. Dhalinyartii xafladas ka dambeysay ayaa ayugana ku jawaabay in aan Kabayare lagaba aqoon Virginia xataa iney heesa tahay laga warheyn.
6. K’naan Warsame vs KAY
Fanaanka caanka ah ee K’naan ayaa mar uu tagay Minnesota sanadkan horaantiise halkaas u ka qabanaayey xaflad, waxana ka codsaday rapper-ka ee reer Minnesota KAY in uu ka qeyb qaato bandhiga K’naan si uu ugu soo caan baxo laakiinse K’naan ma’uusan aqbalin codsigas. KAY ma uusan fariisan oo maalmo kabacdi wuxu soo saaray hees uu ku dhaleeceenayo kuna ceeynaayo K’naan. Heestaas uu ugu magac daray hees albumkii “Troubadour” ku jirtay oo lugu magacaabo “T.I.A”This Is Africa” laakinse KAY wuxu ka dhiga “Trouble in Africa”. KAY waa fanaan Somali ah oo Minnesota ku nool aadna ugu waaya aragsan isku darista kalmadaha Somali-ga iyo English-ka.
7. Nimca Dareen vs Nairobi
Nimca Dareen oo lugu xasuusan karo bandhig faneedyada eey ku qabto aduunka dalacadiisa, ayadoo isku dayda ineey meel kaste oo Somali joogto iney bandhig ka qabato ayadoo ku guuleesata iney isku keento shacab aad u badan. Balse markan ma u dhicin sidey u qoondeysay bandhigeeda, Dareen ayaa xagaagi lasoo dhaafay bandhig ku qabtay Nairobi halkaasoo dad badan imaaden laakinse nasiib daro xafladas ma soconin wax ka badan hal daqiiqo. Nimco ayaa laga soo tuuray masraxa halkaas oo dhawac fudud gaaray xafladiina meeshaas ku dhamaatay. Waa iga su’aale Nimco Nairobi ma ku noqon doonta?
8. Nimco Xasan vs Xuseen Carab
Xuseen wuxu iska qariyaba qofti soo ambaba bixisey wuxu kasoo muuqday muuqaal uu hees la qaadayo gabdho kale, taasna waxa ka carooday Nimco Xasan oo ah xaaskiisi hore oo wax badan radineysay war iyo wacaal meel u dhigayna weysay ayaa is heyn kari weyse waxeena soo qaaday hees. Heestan oo lugu magacaabo “Anoo ku Sugaayo” ayaa hees calool xumo ku dhamaatay waxan ka mida miraha “Anoo ku sugaayo maa saan i yeeshe, ma suurtowda inaa saan igu dhaaftide, su’aasha qiyaama na wada sugeyse”. Xuseen dhulka kama qaadin kalmadaha kasoo maaxday wadnaha gacalisadiisi hore.